ကောင်းလိုက်တဲ့ပညာရေး | MMiN
minkhaung77 ♦ September 28, 2013 ♦ Leaveacomment
ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေက သူ့သားကို ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ထားတယ်။ အဲဒီကျောင်းက လူတိုင်းပါးစပ်ဖျားက ကြယ်ပွင့်ငါးပွင့်ရ နာမည်ကြီးကျောင်းပေါ့။ ကျောင်းလခဈေးကြီးလို့ ဘုရားတ,ရတဲ့ကျောင်း။ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက စီးပွားရေးအသေးစားနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူမို့ ဒီလောက်ကျောင်းလခများတဲ့ကျောင်းမှာ ဘာဖြစ်လို့ သားကို ထားရသလဲလို့ ကျွန်တော်ကမေးတော့ “ကလေးရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်ပါ… ကောင်းတဲ့ပညာရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ကုန်ကျရတာ တန်ပါတယ်”လို့ သူကပြောတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုတစ်လော ကလေးနဲ့အတူ သချာင်္အိမ်စာတစ်ပုဒ်ကို သူကူလုပ်ရင်း စိတ်တိုဒေါသထွက်ပြီး ကျောင်းက ဆရာမကိုသွားရှာ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။
သချာင်္ပုစ္ဆာက အကြမ်းအားဖြင့် ဒီလိုပါ….
တောင်ပြိုတာနဲ့ကြုံတော့ တောင်တက်သမား A ကို B နဲ့ C က ကယ်တင်လိုက်တယ်။ B မှာ ပေါင်မုန့် ၄ချပ်ရှိတယ်။ C မှာ ပေါင်မုန့်၅ချပ်ရှိတယ်။ ဗိုက်ဆာတော့ ဒီပေါင်မုန့်ကို သူတို့သုံးယောက် အညီအမျှခွဲကြတယ်။ A က သူ့မှာရှိတဲ့ ပိုက်ဆံ ၆ဝဝကို ထုတ်တယ်။ B နဲ့ C က A ဆီမှာ ငွေဘယ်လောက်ယူရမလဲ?
ပုစ္ဆာရဲ့ဖြေရှင်းနည်းအမှန်က B က ၂ဝဝရတယ်။ C က ၄ဝဝရတယ်။ B က သူကိုယ်တိုင် ၃ချပ်စားပြီး A ကိုတစ်ချပ်ပေးလို့။ C က သူကိုယ်တိုင် ၃ချပ်စားပြီး A ကိုနှစ်ချပ်ပေးလို့။ Aကိုပေးလိုက်တဲ့ Bနဲ့C ရဲ့ပေါင်မုန့်အချိုးက ၁း၂ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ၁း၂အတိုင်း B ကို ၂ဝဝ၊ C ကို ၄ဝဝ ပေးတယ်။
သချာင်္သဘောတရားကနေကြည့်ရင် ဒါဟာလော့ဂျစ်ဆန်တဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ပေါ့။ အကျိုးအကြောင်းသင့်တယ် ယူဆချက်တိကျတယ်။ ဖြေရှင်းနည်းမှန်ကန်တယ်ပေါ့။ ထိုင်ဝမ်က ပညာရေးသစ် နည်းစနစ်သစ်တွေကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီး မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေကို သချာင်္ဆိုတဲ့စကားကိုကြားတာနဲ့ မျက်စိမျက်နှာပျက်အောင်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်၊ အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့နည်းတွေနဲ့ သင်ကြားရင် ကလေးတွေ ပိုတုံး ပိုအသွားမှာကို စိုးတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီပုစ္ဆာက မျှမျှတတနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွက်ချက်နိုင်တဲ့ပုစ္ဆာပါ။ ဒါပေမယ့် သားသမီးကို အဆင့်မြင့်ပညာရေး သင်ယူစေမယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက ဒီပုစ္ဆာဖြေရှင်းနည်းကို ကြည့်ပြီး အရမ်းစိတ်ထိခိုက်ခဲ့တယ်၊ ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။
“ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုပုစ္ဆာမျိုး ထုတ်ရသလဲ.. တခြားပုစ္ဆာမထုတ်ဘဲ ဘာဖြစ်လို့ ဘေးအန္တရာယ်ကြုံသူတစ်ယောက်ဆီကနေ ပေါင်မုန့်ဖိုးတောင်းရသလဲ” လို့ သူနာနာကျင်ကျင်ပြောပါတယ်။
“ဟုတ်တာပေါ့.. ဒီလောက်ဈေးကြီးတဲ့ပေါင်မုန့် ဘယ်ဆိုင်ကရောင်းသလဲ”လို့ သူ့မိန်းမကပါ ဝင်စွက်ပါတယ်။
ကျောင်းက ဆရာ၊ ဆရာမနဲ့ ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ အစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်ပြီး ဒီပုစ္ဆာအတွက် လူပီသတဲ့၊ လူဆန်တဲ့ “ဘေးအန္တရာယ်ကြုံသူတစ်ယောက်ဆီကနေ ပိုက်ဆံယူဖို့ မလိုဘူး”ဆိုတဲ့ အဖြေပေးဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ ကျောင်းက ဆရာ ဆရာမတွေက သူ့အပြောကို လေးလေးစားစား လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ပြဌာန်းစာအုပ်က ဆရာ ဆရာမတွေ တည်းဖြတ်တာမဟုတ်လို့ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင် သတိထားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါဟာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ် သူ့ကိုတောင်းပန်မှန်း သူနားလည်ပါတယ်။ သူ့ကလေးက ဒီလိုပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်၊ ဒီလိုပညာရေးစနစ်အောက်မှာ သူထင်မှတ်မထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်း တဖြည်းဖြည်း ပုံသွင်းခံနေရပြီဆိုတာကို သူနားလည်လိုက်တယ်။
ဒီလိုခေတ်ပညာရေးအပေါ် သူဘာမှလုပ်နိုင်တဲ့ အင်အားလည်းမရှိ မကျေမနပ်လည်း ဖြစ်သေးတာမို့ “ကျောင်းပညာရေးက တစ်ပိုင်းသပ်သပ်မို့ တော်သေးတယ်။ မိသားစုပညာရေးနဲ့ ဒီကလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ငါတို့ပြုပြင်ဖာထေးပေးနိုင်လို့ တော်သေးတယ်။ နောက်ဆိုရင် ကလေးရဲ့ကျောင်းသင်ခန်းစာအပေါ် ငါတို့ အချိန်ပေးပြီး ပိုဂရုစိုက်ရလိမ့်မယ်”
သူ့ရဲ့ပညာရေးအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်သဘောထားကို ကျွန်တော်နှစ်သက်မိတယ်။ အကောင်းမြင်တဲ့မိဘတစ်ဦးက ကလေးအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အရင်းအနှီးတစ်ခုပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျောင်းပညာရေးက အသိပညာ၊ ဗဟုသုတပညာရေးကို ဦးစားပေးသင်ကြားတာမို့ ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်းမှာ လျစ်လျူရှုမိတတ်တယ်။ ဒါကို ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက သတိထားမိတယ်။ ဒီကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်းကို မိသားစုပညာရေးနဲ့ အခြေခံထားပြီး သင်ကြားရပါတယ်။ ကျောင်းပညာရေးကိုပဲ အားကိုးလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ လူ့ဘဝအောင်မြင်ဖို့ရာ အသိပညာချည်းကိုပဲ အားကိုးလို့မရပါဘူး။ အရာအားလုံးထဲမှာ အသိပညာက တစ်စိတ်တစ်ဒေသပဲ ပါဝင်တာမို့ပါ။
ထိုင်ဝမ်စာရေးဆရာ Wu Ruo Quan (吳若權) ရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာပါတဲ့ စာပိုဒ်လေးတစ်ပိုဒ်ပါ။ ဘာသာပြန်မျှဝေပါတယ်။
နိုင်းနိုင်းစနေ (August. 8. 2013)
Posted in: သိမှတ်ဖွယ်ရာများ
၉၉ ပုံပြင် →